Linux kununura! Mamwe ma distros ekudzoka kubva kunjodzi | Kubva kuLinux
Linux kununura! Mamwe ma distros ekudzoka kubva kunjodzi
Neraki, isu vedu vanoshandisa Linux vane akasiyana siyana ekugadzirisa matambudziko. Many distros anoisa maturusi aya pamwechete mupakeji imwe chete yatinogona kutora chero kupi uye ivo vane mukana wekuve maRed CD, ayo atinogona kumhanya nawo tisingaaisePano isu tichataura chete mashoma emazhinji akanakisa Linux distros kunze uko kuti ashandise seanoponesa masisitimu. Kana Windows yafa, Linux inouya kununura!
2 Dzorerazve Backup uye Kudzorera
3 Ubuntu Kununura Remix
4 Utatu Kununura Disk
SystemRescueCd ndeye Gnu / linux system bootable kubva ku cdrom iyo inoshandiswa kugadzirisa yako system uye kudzoreredza data rako mushure mekundikana. Iyo zvakare inoedza kupa nzira iri nyore yekuita manejimendi mabasa pakombuta yako, sekugadzira nekugadzirisa zvikamu pairi dhiraidhi Iine akawanda masisitimu ekushandisa (akapatsanurwa, chikamu, maficha,…) uye zvekushandisa maturusi (editors, pakati pehusiku mutungamiriri, network zvishandiso). Chinangwa ndechekuti zviite nyore kwazvo kushandisa: ingo bhuti kubva ku cdrom uye iwe unogona kuita zvese. Iyo system kernel inotsigira yakakosha faira masystem (ext2 / ext3, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, vfat, ntfs, iso9660), uye mafaera enetiweki (samba uye nfs).
Aya ndiwo maturusi makuru esisitimu:
GNU Chikamu ndicho chishandiso chakanakisa chekugadzirisa yako hard drive partitions muLinux.
GParted iri dombo reChikamu Chemashiripiti cheLinux.
Chikamu Iyo idzo yeMweya / Dhiraivha-yemufananidzo yeLinux
Filesystem zvishandiso (e2fsprogs, reiserfsprogs, reiser4progs, xfsprogs, jfsutils, ntfsprogs, dosfstools): inobvumidza iwe fomati, kushandura saizi, kugadzirisa chikamu chiripo pane yako hard drive.
Sfdisk inokutendera iwe kuchengetedza uye kudzorera yako yekuparadzanisa tafura
Unogona kutarisa iyo zvishandiso peji kune rumwe ruzivo.
SystemRescueCd inowanikwawo kune mapofu. Zvino, iyo linux speakup vhezheni 1.5 screen muverengi iri kushanda mushe, uye speakup keyboard muverengi yaiswa. Iri basa rakaedzwa naGregory Nowak.
Izvo zvinokwanisika kuita shanduro tsika disc. Semuenzaniso, unogona kuwedzera ako zvinyorwa kuti uite otomatiki system kudzoreredza. Zvinogonekawo pisa DVD yakagadzirirwa ne SystemRescueCd uye 4.2 GB ye data rako (backup, semuenzaniso). Verenga bhuku racho kuti uwane rumwe ruzivo.
Zvakareruka gadza SystemRescueCd padanda re USB. Izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe ukatadza kubhuroka kubva kuCD. Iwe unongofanirwa kuteedzera akati wandei mafaera kune iyo pendrive uye unomhanya syslinux. Iyo yekumisikidza maitiro inogona kuitwa kubva kuLinux kana kubva kuWindows. Tevedza rairo dze manual kune rumwe ruzivo.
Mamwe ruzivo | SystemRescueCd
Dzorerazve Backup uye Kudzorera
Redo Backup uye Kudzorera iko kugoverwa kweLinux kwakanangana nekugadzira backup makopi eiyo hard disk uye kumwe kugadzirisa uye kugadzirisa mabasa.
Redo Backup uye Kudzoreredza kunze kwayo idiki saizi, isingasvike 70MB, mukana wekuishandisa kubva kune liveCD kana USB ndangariro pasina kuisa chero chinhu pakombuta yako, uye yakapusa uye inoshanda mushandisi nharaunda.
Dzorerazve Backup uye Kudzoreredza kunokutendera iwe kuti uwane yako Linux kana Windows zvikamu, wozvigadzirisa uye kuburitsa zvemukati, kufambisa Internet kana kutaura nekutumira mameseji, pakati pezvimwe zvinhu. Asi chishandiso chikuru cheR Redo Backup uye Kudzoreredza ndeye backup basa rayo. Mumatanho mashoma iwe unozogona kugadzira chaiyo kopi ye diski yako uye nekudaro kuidzorera iyo kana iwe ukaita zvisirizvo nekombuta yako, ingave Windows kana Linux.
Pakati pezvishandiso izvo zvinosanganisa isu tine zvirongwa zvekuona chimiro chedu dhiraivha,PhotoRec, kudzoreredza mafaera akadzimwa kubva mukudzokorora bin kana zvishandiso zvekuchengetedza izvo zvinotibvumidza isu kuwiriranisa maforodha maviri uye kuita inowedzera yekuwedzera. Kune zvese izvi isu zvakare tinofanirwa kuwedzera Firefox, chinyorwa chemavara uye chinongedzo kuti tikwanise kuita maodha kubva kukoni.
Uye zvakare, isu tine imwe nzira ye gadzira hard drive kana partition mufananidzo nekukurumidza, iyo inotipa mukana wekuti system yedu ipore nekukurumidza. Kana izvo zvatinoda kudzoreredza iyo faira kana dhairekitori kubva kune yedu hard drive nekuda kwekutadza kwesisitimu, zvichave zvakakwana kushandisa iyo faira browser iyo iyo inosanganisirwa kusvika kune edu akaomarara madhiraivha uye kuteedzera iyo yakati folda kune yekunze hard drive.
Mamwe ruzivo | Dzorerazve Backup uye Kudzorera
Ubuntu Kununura Remix
Iyi ndiyo imwe yeakawanda Ubuntu yakatorwa kugoverwa, yakanangiswa mune ino kesi pakupa akakodzera maturusi ekugona kudzoreredza data redu mune chiitiko chekutadza kweanoshanda system kana chikamu. Chinhu chakanaka ndechekuti vese vashandisi veUbuntu havazove nematambudziko makuru mukushandisa kwayo, kupfupisa iyo curve yekudzidza zvishoma nekuti inobatwawo kuburikidza neconsole, saka kana isu tajaira kushandisa iyi modhi muUbuntu mirairo yakawanda yatinoziva kare. kuzvishandisa.
Chimwe chinhu chinonakidza nezvekuparadzirwa uku kesi zvidzidzo, izvo zvinotipa mienzaniso inoshanda yekudzoserwa kwedata mune dzimwe nguva izvo zvinogona kubatsira zvakanyanya kwatiri. Sezvo mune maviri akapfuura kesi, inosanganisira akati wandei maturusi ekugadzirisa mafaera uye zvikamu, pamwe nekudzosera rakadzimwa dhata kubva mumarara edu emakani.
Mamwe ruzivo | Ubuntu Kununura Remix
Utatu Kununura Disk
Trinity Rescue Kit (TRK) yemahara yekuparadzirwa kweLinux yakagadzirirwa kunyanya kugadzirisa uye kugadzirisa Windows makomputa. Zvimwe zvehunhu hwakakosha ndeizvi zvinotevera:
5 akasiyana antivirus zvirongwa zvinomhanya nemirairo imwechete uye zvinowedzeredzwa kuburikidza neInternet: ClamAV (clam), F-prot (fprot), Grisoft AVG (avg), Bitdefender (bde), Vexira (va).
Kubviswa kuri nyore kweWindows password.
Cloning NTFS faira masisitimu pamusoro peiyo network.
Zvishandiso nemaitiro ekudzoreredza mafaira akadzimwa.
Kudzoreredza kwakarasika zvikamu.
Multicast cloning chinoshandiswa chero faira faira.
2 RootKits yekuona zvinoshandiswa.
Mamwe ruzivo | Utatu Kununura Disk
CDlinux (Compact Distro Linux) ndeye GNU / Linux mini-kugovera inomhanya kubva kuCD uye inokodzera makomputa ane ndangariro diki. Iyo inoshandisa XFCE, isina kureruka uye inoshanda, uye inosanganisa maturusi ekuridza multimedia mafaera, kugadzirisa zvinyorwa, kufefetera paInternet, kutaura uye kugadzirisa mapikicha.
CDlinux inogoneka kwazvo. Tinogona kuitakura kubva kuCD, DoC, Flash, ATA, SATA kana SCSI hard disk, USB, kana IEEE1394 bhazi, uye nekuiisa pane ext2, ext3, jfs, reiserfs, xfs, isofs uye udf partitions, zvakare kuverenga hfs, hfsplus, mafuta kana ntfs.
CDlinux inotsigira huwandu hwakawanda hwehardware uye netiweki michina, saka inogona kushandiswa seimwe nzira yemakomputa ekare kana enetiweki uye yekuchengetedza kana yekudzosa mabasa.
Mamwe ruzivo | CDLinux
RIPLinux i bootable CD kana USB inotibvumidza kupora, kugadzira mabhakiti, bhuti uye kuchengetedza masisitimu. RIPLinux inotsigira ese ese madhiraivha dhisiki uye mafomati ekuparadzanisa, kusanganisira Windows. Iyo ine zvakwakanakira zvakati wandei: iyo inokutendera iwe kuti uwanezve yakakuvadzwa system bhutsu, inotsigira akasiyana mafaira masisitimu, rutsigiro rwemhando dzakasiyana dzemadhisiki uye network Iine "cons" mbiri yekufunga: inoda yakanyanya kukwirisa danho reruzivo uye zvese zvinoitwa kuburikidza neiyo terminal.
Fetchmail, curl, wget, ssh / sshd, mutt, zvinongedzo, msmtp, tmsnc, slrn, lftp, epic uye Firedox inotsigira SSL
Inosanganisira cdrwtool, mkudffs, uye pktsetup mapakeji ekubvumira kunyora kune optical media.
fsck.reiserfs uye 'fsck.reiser4 kutarisa nekugadzirisa reiserfs uye reiser4 fileystem.
xfs_repair kugadzirisa Linux xfs systemystem.
jfs_fsck kutarisa uye kugadzirisa Linux jfs fileystem.
e2fsck kutarisa nekugadzirisa Linux ext2 kana ext3 fileystem.
ntfsresize kudzora masisitimu eWindows NTFS pasina kurasikirwa kwedata.
ntfs-3g kukwanisa kunyorera kumasisitimu eNTFS eWindows.
chntpw inokutendera kuti utarise mushandisi ruzivo uye mapassword pane Windows masystem.
cmospwd inokutendera kuti udzore password kubva kuCMOS / BIOS.
Mamwe ruzivo | RipLinux
Ongorora: kuti uone rondedzero yakakwana yeakanakisa kununura distros, ini ndinokurudzira kuti utarise peji ino.
Zvimwe zvinyorwa: Genbeta
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Linux kununura! Mamwe ma distros ekudzoka kubva kunjodzi
David salazar akadaro
Ivo vanogona zvakare kuwedzera kune iyo rondedzero F-yakachengeteka kana SupergrubDisk
Pindura kuna David Salazar
@ lllz @ p @ akadaro
Ini handifarire kuenzanisa pakati pezvakawanda software zvinoita chinenge chinhu chimwe chete, ini ndinogara ndichida kuwana nekushandisa chakasimba kupfuura zvese, handina kumboshandisa chero cheizvi asi ndeipi yaunofunga kuti ndiyo yakanakisa kuva nayo mune yangu emergency emergency XD
Pindura kuna @ lllz @ p @
Kubvarura kana systemrescue kuenda zvakanaka kwazvo
Mhoro Mario! Kuenzanisa kwaigara kuripo. Iwo makomendi ayo anosanganisira chinongedzo, anoda kuti ndivatarise ndigoipa ok. Zvese zvinhu zvinogara zvichingonaka ... asi spammer ari pabasa haatomboshayikwa. 🙁
Nguva zhinji muhupenyu hwangu semushandisi weLinux, ini ndaifanirwa kushandisa imwe yeiyi "Rescue cd's" kuponesa komputa yangu kana iya yeshamwari dzangu uye ndipo paunoona chaizvo kukosha kwavo. Ndicho chikonzero ini ndinotakura imwe kwese neangu Swiss mauto banga xD.
Yakanaka kwazvo posvo, kunyangwe kune avo vanoshandisa windows uye vanoramba kushandisa linux, zvakanaka kuti vane livecd yakagadzirirwa iyo windows painotadza.
artilcle yakanaka… muunganidzwa mukuru wekununura madhisiki ..
Kune akatiwandei zvinhu zvitsva pano, zvinonakidza kuenzanisa uye kushandisa iyo iyo imwe neimwe yavanoda.
Kwenguva yakareba ini ndashandisa puppy linux seyununura distro, kunyanya nekuda kwekuenderana kwayo kwakanyanya nechero rakaomarara uye rakapamhama software inowanika yekuchengetedza, inotounza iyo clonezilla yakaiswa kuitira kana iwe uchida kupora kana kuita mufananidzo.
Kugona chose. Ini ndatorodha pasi iyo System Rescue uye Redo.
Puppy imwe GREAT distro iyo yakashomeka zvakakwana. Ini handina kungoiwedzera mune ino posvo nekuti kunyangwe ichizoshanda seyununura distro, haina kunge yakanyatsogadzirwa neicho chinangwa mupfungwa. Ini ndinodzokorora, ndinofunga ndiyo imwe yeakanakisa distros.
Chiyeuchidzo, uye kana uine Live CD, uye kubatana kune network yemasaiti, pane zvakawanda zvekugadzirisa chero hurongwa. Mubvunzo mumwe Wakagadzirisa moderation? Asati andiudza kuti aida kuongororwa, chimwe chinhu chakandishamisa xD
Pindura kuna @llomellamomario
Ah, ikozvino ndanzwisisa chinhu chine mwero mune imwe posvo, ndakashamisika. Kutenda nekujekeswa!
Muunganidzwa unonakidza kwazvo. Baba vangu vakashandisa zvakare Knoppix kudzoreredza dhata kubva muchikamu icho chisingachashande.
Ini ndinoshandisa iyo SystemRescueCd yakawanda asi pane kanopfuura kamwe chiitiko (kana ini ndisinayo) ndinoshandisa lubuntu cd chete uye zvakandikwanira…. Chii chandinoziva ... iwe unowana neizvo zvaunazvo, handiti?
Zvakanaka chaizvo pane imwe nguva ini ndaida kudzoreredza grub asi ini handina kukwanisa kuzviita
Ini ndakatevera kuraira kweimwe peji, zvinoita kwandiri kunge zvehunhu
asi hazvina kundishandira: S
hauzove nedzidziso yekuita izvozvo?
Tarisa, heino yakanaka yakazara gwara: http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Recuperar_GRUB
Mune yayo yakareruka vhezheni:
Mufaro! Ndinovimba ndanga ndiri weimwe rubatsiro.
Ini ndinowedzera aya mabwe maviri kubva pano: http://www.supergrubdisk.org/
Rescatux uye Super Grub2 Disk
Iwe wakarasa Parted Mashiripiti
Ini ndangoverenga chirevo ichi: Ini ndoda kutaura nezvazvo. SupergrubDisk yakanaka asi muzviitiko zvakanyanya uye haishande zvakanyanya; inova ruva remeringue kana grub iri mune hda uye kwete sda ​​... iyo yandaive nayo parinenge, yaisagona neshanduro dzekare dzekernel ...
ndizvo zvazviri. muchokwadi, zvese zviri zviviri zvinogona kuitwa neinux distro. 🙂
sosi ngaive newe. LOL.
neRipLinux ndinogona kupora yakarasika GRUB kubva kune linux system?
uye ini ndinogona zvakare kuwedzera saizi yeiyo ext4 partition?
Ndiri kuita windows kupora kuburikidza nemulticast nekuti ini ndiri mutariri we laboratori ine 23 compus, ndakaona kuti nesamba server unorongedza mufananidzo uye uchigovera kune mamwe makomputa, ndatsvaga maitiro ekuzviita, une indea zviri sei izvi? ndatenda
Ndakaedza UDPCast zvinobudirira.
Unogona kudzoreredza mafaera akadzimwa kana mafoto neRoodo Backup ???
Zvikurukuru Hongu. Tarisa uone chinongedzo chinotevera, muchikamu che "Kudzoreredza Yakarasika Dhata":
Alfonso Ovidio López Morales akadaro
Yakanaka, inosimbisa GNU Linux rusununguko rwekugovana ruzivo.
Pindura kuna Alfonso Ovidio López Morales
Gtk + 3 yatove pakati pedu!